पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र १९ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ४ तारिख) शुक्रबार :ॐ जय सन्तोषी माँ, दुर्गा भवानी - Rastriya Yuvajagaran Nepali News
होमपेज धर्म/संस्कृति पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र १९ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ४...
पाठकको पुर्पुरो : वि.सं. २०७७ भाद्र १९ गते (सन् २०२० सेप्टेम्बर ४ तारिख) शुक्रबार :ॐ जय सन्तोषी माँ, दुर्गा भवानी
१९ भाद्र २०७७, शुक्रबार १०:४३
पुर्पुरोमा जे लेखिए पनि भाग्यसँगै कर्म गरौं । यतिखेर समुदायस्तरमै कोरोना भाइरस फैलिरहेको सन्दर्भमा विभिन्न पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञालाई जारी राखेको अवस्था छँदैछ । हामीले मनमा कोभिड–१९ को संक्रमण कतै छ कि भनेर सजग चाहि बारम्बार रहनु पर्दछ जबसम्म खोप हामीले पाउन सक्दैनौं । तसर्थ जहाँ जुन अवस्थामा भए पनि सामाजिक दुरी कायम गरौं । पटक पटक हात धुऔं र स्यानिटाइजरको प्रयोग गरौं । भिडभाडमा नजाऔं । माक्र्सको अनिवार्य प्रयोग गरौं । आफू सुरक्षित रहौं र अरुलाई पनि सुरक्षित बनाऔं ।
कोभिड–१९ महामारी बन्दाबन्दी खुल्ला भएपछि अझ भयावह हुँदै गईरहेको अवस्थालाई बुझेर सबैजना सामाजिक दुरी कायम गर्दै घरमै बसौं । अत्यावश्यक काम बाहेक बाहिर नजाऔं । कोभिड–१९ को संक्रमणबाट २ सय ५७ जनाको निधन भईसकेको अवस्था छ भने संक्रमितको संख्या ४४ हजार ८ सय ७७ जना पुगिसकेको छ । करिब करिब देशैभर कोरोना भाइरस फैलिसकेको छ । यद्यपि २४ हजार २ सय ७ जना सफल उपचारपछि घर फर्केका छन् ।
मेष – धनको आवागमन भइरहनेछ । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । खेलकुद भ्रमणमा आकर्षण बढ्ला । खर्च र भ्रमण बढ्नेछ । हासविलासमा पनि रुची बढ्नेछ । सुख–सुविधाको वस्तु र विलासको बस्तु बढ्लान् । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन । जोखिममा नपर्नु बेस होला ।
बृष – अन्नधन वृद्धि होला । यात्रामा सफलता मिल्नेछ । बोली र व्यक्तित्वको प्रभाव बलियो बन्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । नयाँ आयस्रोत बढ्नुसँगै उधारो लगानी लगाइएको धन उठ्नेछ । रोकिएको काम बन्नुसँगै नयाँ कार्यमा पनि सफलता मिल्नेछ । घरपरिवारको स्थिति अनुकूल रहला साथै कार्य व्यापारमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । धनसित सम्बन्धित वार्तामा सफलता पाउनुहुनेछ । सुखशान्ति महत्व ऐश्वर्य बढ्नेछ ।
मिथुन – प्रगतिशील रहनुहुनेछ । आर्थिक र पारिवारिक क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ । उन्नति–पदोन्नति हुनेछ । हाकिमको साथ भेट्ने छ । सुखशान्ति ऐश्वर्यमा वृद्धि होला । कार्यक्षेत्रसित सम्बन्धित काम बन्नेछ । दायित्वलाई पूरा गर्नुहुनेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । आरोग्यता बढ्ला । मन अनुकूल कार्य बनेर मन प्रशन्न हुनेछ । मान–पुरस्कार प्राप्त होला । विजयश्री मिल्ने छ ।
कन्या – रोकिएको काम बन्नुसंगै नयाँ काम पनि बन्नेछ । मान महत्व बढ्नेछ । जीवनसाथीको सहयोग मिल्नेछ । आयस्रोत बढ्ला । लगानी उठ्ला । सुखशान्ति ऐश्वर्य अभिवृद्धि हुनेछ । साझेदारीको कार्य बन्नेछ । आरोग्यता अभिवृद्धि हुनेछ । मीठो भजन पाउनुहुनेछ । आफन्तको सहयोग मिल्नेछ । हासविलासमा रुची बढ्नेछ । ख्याती फैलिनेछ । धन सम्पत्ति बढ्नेछ ।
तुला – यात्रा हुनेछ । स्वास्थ्यमा सुधारहुनेछ । कार्यक्षेत्रमा सफलता मिल्नेछ । रोकिएको कार्य बन्ला । नयाँ कार्यमा पनि सफलता पाउनुहुनेछ । आफन्तको सहयोग समर्थन मिल्नेछ । रोग र शत्रुसित लड्ने क्षमता बढ्नेछ । शुभ र भाग्यवर्द्धक कार्य बन्ला । मनोकूलको काम बनेर मन प्रशन्न हुनेनेछ ।
वृश्चिक – प्रेमपथमा प्रगति होला । काममा सफलता पाउनुहुनेछ । सद्कर्म पथमा प्रगति होला । भाग्योदय होला । आफन्तको सहयोग बढ्ला । साथीसित भेटघाट होला । बौद्धिक र रचनात्मक कार्यमा सफल हुनुसँगै गीत–संगीतमा पनि आकर्षण बढ्नेछ । इष्टमित्रको सहयोग पाउनुहुनेछ । सन्तान सुख बढ्नेछ । आमोद प्रमोदमा रमिरहनु हुनेछ । शैक्षिक र रचनात्मक कार्यमा सफल रहनेछ । धैर्य र संयमले काम गरेमा सफलता मिल्नेछ ।
धनु – भागदौड र व्यस्तता बढ्नेछ । अरूको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन । आफ्नै बल विवेकले कार्य गर्नु बेस रहला । देखिएको समस्याको समाधान गर्नुहुनेछ । शारीरिक र आर्थिक हीत हुने काममा लाग्नु हितकर रहला । अरुको भरमा बस्नु र विवादमा पर्नु उचित हुने छैन । हांसविलास खेलकुद भ्रमण आदिमा रुचि बढ्ला । जोखिमप्रति सचेत रहनु पर्नेछ ।
मकर – ऋण रोग र शत्रुलाई जीत्ने सामर्थ्य बढ्नेछ । साहसिक काम बन्नेछ । मिठो भोजन मिल्नेछ । रसरागमा रुचि बढ्ला । विकासको नयाँ सम्भावना देखापर्ला । आशा उत्साह बढ्नेछ । यात्रामा सफलता पाउनुहुनेछ । सुखशान्ति बढ्नेछ । लेखन प्रकाशनसित सम्बन्धित कार्य बौद्धिक र रचनात्मक कार्य आदि क्षेत्रमा सफलता पाउनुहुनेछ । इष्टमित्रको सहयोग भेट्ने छ । ऐश्वर्य बढ्नेछ ।
अघिको समचार केराबारीमा प्रशासकीय अधिकृत पौड्याल द्वयको बिदाई तथा स्वागत
अर्को समचार १ नम्बर प्रदेश कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा, शुक्रबार १ सय ४५ संक्रमित थप